कृषि क्षेत्रभित्र गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कृषिमन्त्रीको चेतावनी –
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले आफू कृषि क्षेत्रको चौकिदार भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुसँग मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रभित्र गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘म कृषि क्षेत्रको चौकीदार हुँ । कसैले यसभित्र पसेर बदमासी गर्न खोज्छ, तपाईंहरूलाई गलत काम गर्न दबाब दिन्छ भने मैले गेटबाटै तह लगाइदिन्छु’, उनले भने, ‘त्यसो भएपछि तपाईंहरूले त प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपऱ्यो नि ।’
उनले देश बिगार्नमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहेको बताए । मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिने दाबी गरेका छन् । ‘तपाईंलाई कसैले अनावश्यक दबाब दिन्छ भने सिधै मलाई भन्नुहोस्, त्यस्तालाई म तह लगाउँछु’, भुसालले भने ।
मन्त्री भुसालले परिणाम देखिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले काम गर्न नसक्ने भए छोडेर जान पनि चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारी तथा निर्देशकहरू रामबहादुर केसी, नविन प्रकाश पौडेल र डा. स्वंय प्रकाश श्रेष्ठले नार्कको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
« ढकमढ सयपत्री,भारतबाट फूल नआउने भएपछि नेपाली किसान हर्षित
माडर भन्सार भएर प्याज आयत, भन्सार कर्मचारीको मिलोमतोमा एउटै प्रज्ञापनमा पटक पटक ढुवानी »